Shina 30ml (1oz) tavoahangy Boston Amber Glass miaraka amina Dropper- ho an'ny orinasa mpamatsy menaka, menaka na menaka manitra sy mpamatsy | Hoyer
30ml (1oz) tavoahangy Boston Amber Glass miaraka amina famonon-drongony - ho an'ny menaka manitra, menaka na hanitra
Azonao atao ny misafidy ny fampiasana takelaka dropper na bakelite rakotra miaraka amina plastika ho an'io tavoahangy io. Raha mampiasa takelaka dropper, azonao atao koa ny manana safidy maro amin'ny karazana pipette, loko milina. Misy karazana pipette miisa 3 indrindra ary manaiky loko milina be ianao raha ny takinao, alefaso aminay ny fanontanianao.
Weight: 44g / 0,05 pounds
Haavo: 78mm / 3.07 santimetatra
Ny fitaratra amam-boninkazo misy setera dropper, refillable, fiarovana ny UV, mora ny manadio, karazana tenda.
Ny fitaratra amboadia matevina dia afaka miaro ny ranon-javatra mora maizina toy ny fofona manitra na menaka ilaina amin'ny alàlan'ny toetran'ny fiarovana UV, ary ny vatany kely dia mora be ny mitondra sy ny toerany. Ny pipette dia vita amin'ny vera fisakafoanana sakafo, ka tsy mila manahy momba ny fiarovana ianao, na ny fifandraisana amin'ny menaka ao anaty tavoahangy. Ho tena mahasalama sy azo antoka tokoa rehefa mampiasa io tavoahangy io ianao.
Fampiasana isan-karazany: ity safidy dropper tsara ity dia safidy tsara ho an'ny menaka homana, ny hanitra na ny freshener amin'ny tranobe, tsy hanenina mihitsy ianao amin'ny fisafidianana azy.
Azo averina ny averina: aorian'ny famoahana ny ranon-javatra dia azonao atao ny mamerina mamorona rano tianao, fa arakaraka ny tsiranoka manokana dia avelao izy hanalavitra ireo zaza latsaky ny 6 taona. Na ampiasao eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe.
Size Boky: 30 ml lanja: 44 g Haavony: 78 mm Haavo: 33 mm Boky: 1oz lanja: 0,05 pounds Haavony: 3.07 santimetatra: 1,3 sm
Previous: 16oz 500ml Amber Glass Boston Bottle miaraka amin'ny paompy mainty
Manaraka: 16 tavoahangy kobalt Blue tavoahangy kobobaka 16 naz 500ml miaraka amin'ny paompy plastika
tavoahangy tavoahangy menaka ilaina